बाल विवाह : १५ वर्षमा सन्तान, दण्ड जरिवाना खोई ? | | Satyadeep Sandesh
गृहपृष्ठ बाल विवाह : १५ वर्षमा सन्तान, दण्ड जरिवाना खोई ?
बाल विवाह : १५ वर्षमा सन्तान, दण्ड जरिवाना खोई ?
सुनसरी, चैत्र । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ लौकहीको मुसहर बस्तीकी सोनुदेवी सदाको १४ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । विवाह भएको एक वर्षपछि उनको पहिलो सन्तानका रुपमा छोरी प्राप्त भयो । अहिले सोनुको उमेर १७ वर्षको भएका बेला अर्को सन्तानका रुपमा गर्भमा आठ महिनाको बच्चा छ ।
सोही ठाउँकी आनन्दीदेवी ऋषिदेवको १३ वर्षकै उमेरमा विवाह भयो । विवाहको एक वर्षपछि उनको पहिलो सन्तानका रुपमा छोराको जन्म भयो । अहिले १६ वर्ष पुगेका उनका दुई वर्षीय छोरा छन् । त्यसैगरी लौकही मुसहका छन् । उनको १३ वर्षकै उमेरमा विवाह भएको हो । उनिहरु तीनैजना त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधि पात्र हुन् ।
विभिन्न नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाले बालविवाहसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम वार्षिक रुपमा सञ्चालन गर्छन् । त्यो कार्यक्रम कागज र कोठामा मात्र सीमित छ । कानुनमा कम उमेरमा विवाह गरे केटा र केटी पक्षलाई दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । त्यसले पनि उक्त समुदायमा पूर्णतया छुन सकेको देखिँदैन ।
पछिल्लाे - कोरोना असर : बेलायतमा इपिएल, दिल्लीमा आइपिएल स्थगित
अघिल्लाे - ‘कमेडी च्याम्पियन’ बने हिमेश पन्त